World: Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - PressFrom - US
World Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party
19:57 13 november 2017 Source: ap.org
HARARE, Zimbabwe – Zimbabwe 's army commander says the military is opposed to the instability in the country's ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president.
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe 's army commander Monday criticized the instability in the country's ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president. This is the first time Zimbabwe 's military has directly criticized the infighting in ZANU-PF and marks a rift
© The Associated Press Zimbabwe's Army Commander, Constantino Chiwenga addresses a press conference in Harare, Monday, Nov. 13, 2017. The army commander Monday criticized the instability in the country’s ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
HARARE, Zimbabwe — Zimbabwe's army commander Monday criticized the instability in the country's ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president.
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe 's army commander Monday criticized the instability in the country's ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president.
but said the defense forces "strongly urge the party to stop the reckless utterances by politicians from the ruling party denigrating the military which is causing Doctor who made music videos in operating room facing several malpractice lawsuits. 5th. Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party | Fox News - www.foxnews.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.apnews.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.yahoo.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.ksl.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.seattletimes.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party | WSB-TV - www.wsbtv.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - YouTube - www.youtube.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe 's army commander Monday criticized the instability in the country'
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party | KSL.com - www.ksl.com
Zimbabwe 's army commander Monday criticized the instability in the country's ruling party caused by President Robert Mugabe who last week fired a vice president. This is the first time Zimbabwe 's military has directly criticized the infighting in ZANU-PF and marks a rift between Mugabe and an
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.businessinsider.com
Zimbabwe army chief criticizes infighting in ruling party - www.taiwannews.com.tw